Kwi-geometry kunye nemathematika, ii-angles eziqhelekileyo ziyi-angles ezilinganiswayo phakathi kwe-0 no-90 degrees okanye i-radian ezingaphansi kwama-90 degrees. Xa ixesha linikezwa unxantathu njengalonxantathu olunzima , kuthetha ukuba zonke iingongoma zintathunxana zingaphantsi kwama-90 degrees.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba i-angle kufanele ibe ngaphantsi kwe-90 ° echazwe njenge-angle ekhangelekileyo. Nangona kunjalo, ukuba i-angle i-degrees engama-90, i-angle iyaziwa njengengalo efanelekileyo , kwaye ukuba ikhulu kuneengu- 90, ibizwa ngokuba yi-angle obtuse.
Ikhono labafundi ukuchonga iintlobo ezahlukeneyo zeengxube ziya kubanceda kakhulu ekufumaneni ukulinganisa kwezi ngxube kunye nobude bamacandelo obunzima obunjengezi ngqungquthela njengoko kukho iifomula ezahlukeneyo abafundi abangasebenzisa ukufumana iimpawu ezingekhoyo.
Ukulinganisa ama-Angles Acute
Xa abafundi befumene iintlobo ezahlukeneyo zeengcingo baze baqale ukuzibona ngokubona, kulula ukuba baqonde umahluko phakathi kobuqili kunye nokugqithisa kwaye bakwazi ukubonisa i-angle efanelekileyo xa bebona enye.
Sekunjalo, nangona eyazi ukuba zonke iilwimi eziqhelekileyo zilinganisa kwindawo ephakathi kwe-0 no-90 degrees, kunokuba nzima kubafundi abathile ukuba bafumane ukuchaneka nangokuchanekileyo kwezi ngongoma ngoncedo lwabaqashi. Ngethamsanqa, kukho iifomula ezizamile kunye neyinyaniso kunye nokulingana ukuxazulula ukungabikho kwemilinganiselo yama-angles kunye namacandelo omgca enza iinqantathu.
Kwinqwelathu yokulinganisa, elona hlobo oluthile lwee-triangles ezilumkileyo ezinama-angles onke anemilinganiselo efanayo, iqulethwe ngamanglwana angama-60 angamazinga kunye nobubanzi obulinganayo ububanzi kwicala ngalinye, kodwa kuzo zonke i-triangles, ukulinganisa kwangaphakathi kweengalo kuqhubeka ukuya kuma-degrees angama-180, ngoko ke ukuba imilinganiselo yekona enye iyaziwa, ngokuqhelekileyo kulula ukufumana enye imilinganiselo yee-angle engekhoyo.
Ukusebenzisa i-Sine, i-Cosine, kunye neTangent kwi-Triangles yokulinganisa
Ukuba unxantathu umbuzo ungowona ngileyo, abafundi bangasebenzisa i-trigonometry ukuze bafumane iimilinganiselo ezingekhoyo zokulinganisa ii-angles okanye amacandelo omgca wenxantathu xa ezinye iinkcukacha zibonisa malunga nombolo ziyaziwa.
Izilinganiso ezisisiseko ze-trigonometric zesine (isono), i-cosine (cos), kunye ne-tangent (tan) zibhekise emacaleni omnxantathu kumangele angalunganga (acute), abizwa ngokuba yi -ta (θ) kwi-trigonometry. Ikhoneni elichasene nekona elifanelekileyo libizwa ngokuba yi-hypotenuse kunye namanye amacandelo amabini enza i-angle efanelekileyo yayaziwa njengemilenze.
Ngaloo mabhile amacandelo engxantathu engqondweni, izilinganiso ezintathu ze-trigonometric (isono, i-cos, kunye ne-tan) zingabonakaliswa kwisethi elandelayo yefomula:
i-cos (θ) = kufuphi / i- hypotenuse
isono (θ) = ngokuchasene / ukucinga
tan (θ) = ecaleni / ecaleni
Ukuba siyazi ukuba imilinganiselo yenye yale miqathango kwisethi esingentla apha yefomula, sinokusebenzisa sonke isisombululo kwiimpawu ezingekhoyo, ngokukodwa ngokusetyenziswa kwe-calculator yegrafing ene-built-in function for calculating sine, cosine, kunye neengcambu.